च्व! यसपाली पनि नाम निस्किएनछ है??
0 comments,0shares, 286 views
माघको महिना, बिवाहको माहोल।
एकजना आफन्तको बिवाहको निम्तो मान्न चाबहिल गएकी थिए, चिनेजानेका मानिसहरु र आफन्तहरुको बाक्लो जमघट थियो।
सन्चोबिसन्चोको खबर आदानप्रदानपछि एकजना दिदिले मतर्फ फर्कदै भन्नुभयो,"च्व! यसपाली पनि नाम निस्किएनछ है?"
मनभरी खिन्नताको कालो बादल मडारिन थाल्यो, अनुहारमा त्यस बादलको प्रभाव पक्कै पर्यो होला तर ओठलाई जबर्जस्ती तन्काएर हासेझै गर्दै भने, "हजुर, निस्किएन।"
पार्टिको रमाईलो माहोलमा बिर्सिएको दु:खलाग्दो बिषय सम्झनामा ल्याईदिएर दिदी अरुसङ्गै गफ गर्न लागिन।
मेरो मन भने सोचाईको गहिरो समुन्द्रमा छ्वाम्म हाम फाल्न पुग्यो।
पाच बर्षपहिले ब्याचलर सकिएका दिनहरुमा:
"अब के गर्ने?"
"मास्टर्स जोईन गर्ने त होलानी?"
"होईन होईन, लोकसेवा पढ।"
यस्तै यस्तै आवाजहरु कानमा ठोक्किन आईरहन्थे। मजस्तै मध्यमबर्गिय परिवारका छोराछोरीहरुको सपना भनौ या बाध्यता, 'लोकसेवा पास गर्नु' भबिस्य दरिलो बनाउने बिकल्पहरुको पहिलो स्थानमा पर्ने नै भयो।
ब्याचलर सक्नेबित्तिकै घरमा आएका दर्जनौ बिवाहका प्रस्ताबहरु 'आत्मनिर्भर बनेपछी मात्र बिवाह गर्छु' भन्ने बहानामा नकारिए। गरिराखेको प्राईभेट जबसंग 'पढाईलाई समय दिन नसकिएको' बहानामा बिछोड भयो।
लोकसेवाका महङ्गा किताब किन्नकै लागि तरकारीहरुमध्येमा सस्तो छान्नमा झन्डै एक्सपर्ट भईयो। पानी बत्ती आदिको खासै राम्रो सुबिधा नभएका घरमा सस्तो भाडा तिर्नपर्ने लोभमा हरेक महिना कोठा सर्नपनी पछि परिएन।
जब मास्टर्स को फर्म खुल्यो "योबर्ष लोकसेवा नै पास गर्ने, अर्कोबर्ष मात्र मास्टर्स जोईन गरौला" भनेर बसियो।
कठ्याङ्गिने जाडोमा बिहानै ओछ्यानको न्यानो छोडेर नाम चलेका ईन्स्टिच्युट धाएकै हो। दिनभर अरु बदाम र सुन्तला खाएर घाम तापिरहदा आफू मन बाधेर कोठाको ढोका बन्द गरि सामान्यज्ञानका ठेली पल्टाएर बस्ताका क्षण कम कष्टप्रद थिएनन् । अनि रातमा निन्द्रा नलागोस भनेर वढ्दो एसिडिटी को कुनै ख्याल नगरी कपभरी कफि लिएर त्यही कफिको लत बसुन्जेलसम्म पढेकै हो।
सङ्गै कलेज पढ्दाका साथिहरु युरोप र अमेरिकाको भिषा लगाएर उढ्दा, तिनिहरुलाई एयरपोर्ट छोडेर फर्कदाको रात एकपटक मन भड्किन्थ्यो," ऊनीहरुको त लाग्यो भने तेरो पनि भिषा कसो नलाग्ला? त चाहिँ किन कोशिश गर्दिनस?" तर दिमागले फेरि सम्झाउथ्यो," नेपालमै तिम्रो राम्रो भविष्य छ, मेहनत गरेर पढ।"
पहिलोबर्ष महत्वाकांक्षी बनेर अफिसर को मात्र परीक्षा दिईयो, फस्ट पेपरमै नाम ननिस्किएपछी मन नराम्ररी टुकृयो।
दोश्रो बर्ष अफिसर नसकिने रहेछ भनेर नासु र खरिदारमा बढी मेहनत गरे, तर नतिजा उस्तै।
तेश्रो बर्श खुलेजती सबैतिर परीक्षा दिदा एक न एक तिर कसो ननिस्किएला भनेर बिद्युत, टेलिकम, सन्चय कोष, अन्य संस्थानहरु जहाँजहाँ बिज्ञापन हुन्छन त्यहाँत्यहा फर्म भरियो। भगवान यसपटक पनि निष्ठुर नै बने।
यसपटक त भगवान मात्र होईन बुवाआमा पनि निष्ठुर बनिदिए। 'राम्रो घरबाट कुरा आएको छ' भन्दै फकाईफुल्याई एक एन.जि.ओ का कर्मचारिसङ्ग लगनगाठो कसिदिए।
बिवाहपछिको पहिलोबर्श घरबाट कुनै रोकटोक भएन। पढाईलाई निरंतरता त दिन पाईयो तर छोरी हुनभन्दा बुहारी हुन धेरै गार्हो हुने रहेछ। परिवारलाई समय, श्रीमानलाई समय, भान्सामा समय, पाहुनाको स्वागत सत्कारमा समय, जाबो चौबिस घन्टाको एक दिन अनि त्यही दिनभित्र आफुले निर्वाह गर्नुपर्ने अनेकौ भुमिका। दिनभरमा मुस्किलले तीन- चार घन्टा पढ्न पाईन्थ्यो, त्यहिपनी अन्य कामको थकाइले पढाइ सोचेजती प्रवाभकारि नहुने।
बढ्दो महङ्गिमा घरखर्च चलाउने जिम्मेवारी श्रीमानको मात्र काधमा रहदा कुनै तरकारी सामान्यभन्दा महङ्गो भाउमा किन्नुपरेको दिन मुटुको ढुकढुकि बढ्थ्यो, आफ्ना रहरहरु त खै कता पन्छिन्थे कुनै हेक्का हुन्नथ्यो।
चौथो बर्शका नतिजाहरुले पनि निराश बनाएपछि घरमा सासू ससुराको नाति नातिना खेलाउन पाउनुपर्ने ईच्छाले दिनहुुँ तनाव दिन शुरु गर्यो।
चार बर्शसम्म पनि कुनै सफलता हात नपरेपछी शहरमा नाम चलेका ज्योतिषीको मा गईयो।
"तिमिलाई लोकसेवा पास गर्न गार्है छ नानी।" ज्योतिशिले झन बढी निरास बनाईदिए।
त्यसपछी पनि हार मानिएन। "हात नहुनेको पनि भाग्य हुन्छ" भन्दै आफ्नो मनोबल आफैले दर्हो पारेर पाचौं बर्शपनी प्रयासलाई निरंतरता दिईरहे।
पाँचौ बर्शको मेहनत पनि बालुवामा पानी भएपछी श्रीमान अलिक कडै रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो," तिमीले यो पार लगाउदिनौ कान्छी, अब कि त आउदो बर्श जसरी पनि पास गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी देउ कि त बुवाआमाको नातिनातिना खेलाउने ईच्छा पूरा गरौ।"
र मैले बाध्य भएर दोश्रो बिकल्प रोजे।